कोरोनाको लागि ग्रहणको असर कस्तो हुन्छ त ! – News Dainik
कोरोनाको लागि ग्रहणको असर कस्तो हुन्छ त !
news ७ असार २०७७, आईतवार १०:३१ विविध प्रतिकृया दिनुहॊस
काठमाडौं । यही वि.सं. २०७७ असार ७ गते आइतवार खण्डग्रास सूर्य ग्रहण लाग्ने ज्योतिषीहरुले बताएका छन् । यो ग्रहण खण्डग्रास भएपनि खग्रास ग्रहण जस्तै लामो हुने बताइएको छ । विहान १०ः५० बजेदेखि दिउसो १४ः२३ बजेसम्म लाग्ने यो ग्रहणको अवधि ३ घण्टा ३३ मिनटको हुने संवद्ध स्रोतहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
यो ग्रहण पछि कोरोनाको महामारी क्रमशः कम हुँदै जाने ज्यो. सुवेदीको भनाई रहेको छ ।
मेष राशिको लागि व्यक्तिगत रुपमा फाइदाजनक हुने, श्रीवृद्धि हुने, वृष राशिको लागि क्षतिकर हुने, लेनदेन आदि कारोबारमा सावधानी अप्नाउनु पर्ने । मिथुन राशिको लागि अल्लि बढी कष्टकर अथवा घातप्रद हुने, कर्कट राशिको लागि ग्रहणको फल व्ययकर अर्थात खर्चप्रद रहने, सिंह राशिको लागि भने यो ग्रहणको फल लाभकर हुने उनको भनाई छ । यसै गरी कन्या राशिको लागि सुखप्रद, मानप्रतिष्ठा, कामकार्यमा उन्नतिप्रगति हुने, तुला राशिको लागि मान नाश हुने, जनव्यवहारमा सावधानी अप्नाउनु उचित हुने भनिएको छ ।
वृश्चिक राशिको लागि स्वास्थ्यमा कष्ट पर्नसक्ने, आहारविहार आदिमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने बताइएको छ । धनु राशिको लागि श्रीमानश्रीमती तथा प्रेमि प्रेमिकाबीच द्वन्द पर्नसक्ने, व्यापार कारोबार र यात्रामा पनि ख्याल पुर्याउनु पर्नेछ । यसै गरी मकर राशिको लागि सुख एवं आरोग्यवर्धक रहने, कुम्भ राशिको लागि चिन्ता बढाउने संभावना, विद्यार्थीहरुले अध्ययनमा बढी प्रयत्न गर्नुपर्ने, मीन राशिको लागि यो ग्रहणको फल रोगव्याधिप्रद रहने र खानपान आदिमा ध्यान दिनुपर्ने सुवेदीको ज्योतिषीय विश्लेषण छ ।
अघिल्लॊ छैठौं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस : रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउँन योग उत्तम !
पछिल्लॊ मेरो आग्रहलाई केही बुद्धिजीवीले मजाकमा उडाए : प्रधानमन्त्री